Mayelana NATHI - INanjing Liming Bio-products Co, Ltd.
INanjing Liming Bio-products Co., Ltd.
INanjing Liming Bio-products Co., Ltd. eyasungulwa ngonyaka ka-2001, inkampani yethu ibilokhu ikhethekile ekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekukhangiseni izivivinyo ezisheshayo zezifo ezithathelwanayo ikakhulukazi ama-STDs.Apart kusuka ku-ISO13485, cishe yonke imikhiqizo yethu i-CE imakiwe futhi i-CFDA ivunyelwe. Imikhiqizo yethu ikhombise ukusebenza okufanayo uma kuqhathaniswa nezinye izindlela (kufaka phakathi i-PCR noma isiko) ezidla isikhathi futhi ezibizayo. Sisebenzisa izivivinyo zethu ezisheshayo, iziguli noma ochwepheshe bezempilo bangonga isikhathi esiningi sokulinda ngoba kudinga nje iminithi elingu-10.
Besilokhu sinake ngokuqinile izinqubo zokuqinisekisa ikhwalithi futhi silalela imithetho yamanje yamadivayisi wezokwelapha wokukhiqiza, ukulawula ikhwalithi, ukugcinwa, ukuthuthwa nokusekelwa kwezobuchwepheshe, okwenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme isebenzele amaklayenti ethu kuwo wonke ama- umhlaba.
Ngokuhambisana nobhadane lomhlaba wonke olusatshalaliswa yi-COVID-19, amazwe emhlabeni wonke abelokhu ebhekene nobunzima bokuthola nokulawula lesi sifo ngesikhathi.Our ethu athuthukise izindlela ezintsha, ezizwela kakhulu futhi ezithize zeserological nezingqamuzana zokuhlolwa kwe-COIVD-19.
Umsebenzi wethu ukuba ngumhlinzeki wezixazululo zemikhiqizo ye-POCT futhi sibheke phambili ekusebenzeni nawe ukwenza isithombe esihle sempilo yomuntu.
Umugqa wesikhathi womkhiqizo
Le nkampani yasungulwa futhi yaba ngumhambisi weBio Merieux no-Alere
Shintshela ocwaningweni oluzimele, ekuthuthukisweni nasekukhiqizweni kwe-IVD, bese uthola izitifiketi zokubhalisa eziyi-6 class III, 1class II Registration Certificate kanye nezitifiketi zokubhalisa ezi-5 class class ezikhishwe yi-State Food and drug management
Ukwakhiwa okuphumelelayo kwesikhulumi sobuchwepheshe besifo sokuthola
Ithuthukise ngempumelelo ithuluzi lokuhlola le-coronavirus pneumonia
Ube ngumlingani wesikhathi eside wokuhlinzeka ngama-reagents wokuhlolwa kwekholera osheshayo we-UNICEF futhi wasayina isivumelwano sokusebenzisana sesikhathi eside nenkampani yethu
ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, ICoronavirus Antigen Test Kit, H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket,